Adobe Creative Cloud Express: Akanaka Matemplate eSocial Media Content, Logos, uye Zvimwe | Martech Zone
Muvhuro, Kukadzi 21, 2022 Muvhuro, Kukadzi 21, 2022 Douglas Karr
Kana Mari Smith achiti anoda a chishandiso chekushambadzira paFacebook, zvinoreva kuti zvakakosha kutarisa mukati. Uye ndizvo chaizvo zvandakaita. Adobe Creative Cloud Express, yaimbozivikanwa se Adobe Spark, ndeye yemahara yakabatanidzwa webhu uye nhare mhinduro yekugadzira uye kugovera inobata nyaya dzekuona. Creative Cloud Express inoita kuti zvive nyore kutanga nematani ehunyanzvi akagadzirwa matemplate uye zviwanikwa zvesocial media zvemukati, marogo, nezvimwe.
NeAdobe Creative Cloud Express, unogona kugadzira zviri nyore zvemagariro magirafu, marogo, mapepa, mabhena, Instagram Nhau, kushambadzira, mabhena eYouTube, Maposta, Bhizinesi Kadhi, YouTube Thumbnails, nezvimwe. Iyi puratifomu ine zviuru zvematemplate pamwe nemifananidzo-yemahara mifananidzo yaunogona kushandisa.
Paunenge uchinge wapinda uchishandisa yako Adobe ID kana pasocial login, unogona kutanga chirongwa chitsva kana kuwana mapurojekiti apfuura iwe watotanga kana kupedza. Iyi puratifomu yakavakirwa iyo isiri-dhizaini, ichikugonesa iwe kugadzira chero chaunoda, zvese munzvimbo imwechete, ine intuitive zvishandiso zvinokutendera kuti ubvise kumashure, animate mavara, wedzera brand yako, nezvimwe zvakawanda. Nematepi mashoma iwe unogona kugadziridza zvemukati chero yesocial media saiti uye wedzera Adobe Photoshop mhando mhedzisiro mukukurumidza.
Iwe unogona zvakare kugovera marogo, mafonti, uye zvimwe zvinhu zvemhando nechikwata chako, uye kudhinda uye kugovera magwaro ePDF ane maficha anofambiswa neAdobe Acrobat - kuti ugare uchiisa basa rako rakanakisa kumberi. Shanda kubva padesktop papuratifomu kana dhawunirodha imwe yenharembozha kuti utange!
Tags: adobe creative cloud Expressadobe sparkadobe spark pejiadobe spark postadobe spark vhidhiyozvizivisovhidhiyo yehupenyumabhenamabhizinesi makadhikugadzira mifananidzogadzira social media graphicsgadzirisa vhidhiyoFlyersinstagram storieslogoszvekunamiragoverana nyayayemagariro mifananidzoStorytellingvhidhiyo yekugadzirisanyaya dzewebhuyoutube mireza